musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » United Airlines: Tora COVID-19 jab kana kurasika
United Airlines: Tora jabhu kana kurasika
Vashandi veUnited Airline vanoramba mushonga weCOVID-19 havazobvumidzwe munzvimbo yebasa mushure maGumiguru 2.
United Airlines inozivisa COVID-19 mvumo yekudzivirira yevashandi.
United Airlines inoramba COVID-19 jab ichadzingwa basa.
Vashandi vendege vakasunungurwa nemishonga yekudzivirira vanozoiswa muzororo risingaperi.
Mune memo yekambani yakatumirwa nezuro, United Airlines yakazivisa kuti vese vashandi vendege vanogashira zvechitendero, zvekurapa kana zvekuregererwa kubva kuchirwere chekumanikidzwa checoronavirus vachatumirwa pazororo risingabhadharwe kana rekurapa zvachose, zvisinei nechikonzero chekuregererwa kana chinzvimbo.
"Kana denda radzokera zvine mutsindo, unozogamuchirwa kudzoka pachikwata pane chinzvimbo chinoshanda," vatyairi, vanoshanda nendege nevamiriri vevashandi - vanotsanangurwa sevashandi mu "mabasa anotarisana nevatengi" - vakaudzwa mune memo.
United Airlines Vashandi vasingabatanidzi zvakananga nevatakuri, vakadai sevatumwa nemakanika, avo vakabvumidzwa kuregererwa vanofanirwa kuongororwa vhiki nevhiki uye kupfeka chifukidziro nguva dzese pavanenge vari kubasa, kusanganisira kana vari panze.
Chero ani zvake achapihwa mukana wekurapwa anozoiswa pazororo rekurapwa kwenguva pfupi. Vaya vane chikumbiro chekuregererwa chakarambwa vanofanirwa kutora yekutanga kupfura muna Gunyana 27 uye vabaiwe jekiseni mukati memavhiki mashanu kana kurasikirwa nebasa zvachose, maererano nememo yakatumirwa neVP yevashandi Kirk Limacher.
United Airlines manejimendi yakanga isina kutaura kuti mutakuri angave anoda sei kupa zvikumbiro zvekuregererwa, uye ndege haina kutaura kuti yagamuchira yakawanda sei.
United yaive yekutanga ndege yeUS kumanikidza COVID-19 mvumo yekudzivirira pavane 67,000-pamwe nevashandi, kutanga kwaNyamavhuvhu. Dzimwe ndege dzendege dzaenda kunogumisa kudzivirirwa kwemubhadharo kune vasina kuvhiyiwa vanoongorora hutachiona. Delta Air akarova mari inosvika mazana maviri emadhora pamubhadharo wehutano wevashandi vasina kubayiwa nhomba.
Makambani eUS nemasangano ehurumende vanosungirwa zviri pamutemo kupa vasunungurwa pazvitendero kana zvekurapa, kunyangwe zvisiri zvekuvapa. Hutungamiriri hweBiden hwakasundidzira hutongi hweveruzhinji uye hwakavanzika sezvo huwandu hwezviitiko zveCOVID-19 muUS zvakwira muzhizha.
Ndege, uye mutyairi wendege nemubatanidzwa wevashandi vekufamba nendege vakagamuchira nechido kuwedzera kuwanda kusingaenzaniswi kwebasa rehurumende remasikisi, rakatangwa muna Kukadzi uye raida kupedza mazuva zana.
United ndiyo ndege yechina pakukura muUS nenhamba yevatakuri vakatakurwa, asi ine yechipiri pakukura ngarava uye inoshandira nzvimbo dzakanyanya, sekureva kwenhamba dzisati dzavapo.